Pope Francis gwara ndị ụkọchukwu Venezuelan: iji 'ọ joyụ na mkpebi siri ike' na-eje ozi n'etiti ọrịa ahụ na-efe efe | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Pope Francis gwara ndị ụkọchukwu Venezuela: iji 'ọ joyụ na mkpebi siri ike' jee ozi n'etiti ọrịa ahụ na-efe efe
Pope Francis zigara ozi video na Tuesday na-agba ndị ụkọchukwu na ndị bishọp ume n'ozi ha n'oge oria coronavirus na-echetara ha ụkpụrụ abụọ nke, dị ka ya si kwuo, "ga-eme ka mmụba ofka pụta".
"Achọrọ m igosi gị ụkpụrụ abụọ ndị a na-agaghị efunahụ ma na-enye mmụba uto nke Churchka, ma ọ bụrụ na anyị kwesịrị ntụkwasị obi: ihụ ndị agbataobi anyị n'anya na ijere ibe anyị ozi," ka Pope Francis kwuru n'ozi vidiyo nke nzukọ ndị ụkọchukwu na bishọp na Venezuela na Jenụwarị 19.
"Egburu ụkpụrụ abụọ a na sacrament abụọ nke Jizọs guzobere na Nri Anyasị Ikpeazụ, nke bụkwa ntọala nke ozi ya, dị ka a pụrụ isi kwuo ya: Oriri Nsọ, ịkụzi ịhụnanya, na ịsa ụkwụ, iji kụzie ọrụ. Hụnanya na ọrụ ọnụ, ma ọ gaghị arụ ọrụ “.
Na ihe onyonyo a, nke ezigara na nzukọ nzukọ ụbọchị abụọ gbadoro anya na ọrụ ndị ụkọchukwu n’oge nsogbu coronavirus, popu gbara ndị ụkọchukwu na ndị bishọp ume ka ha jee ozi “meghachinụ onyinye nke onwe unu nye Onyenwe anyị na ndị nsọ ya” n’oge ọrịa a na-efe efe.
Nzukọ a, nke nzukọ ndị Bishọp nke Venezuelan haziri, ga-eme otu izu na ọkara mgbe ọnwụ nke onye Bishọp nke Venezuelan Cástor Oswaldo Azuaje nke Trujillo n'ihi COVID-19 mgbe ọ dị afọ 69.
Pope Francis kwuru na nzukọ a nke ọma bụụrụ ndị ụkọchukwu na ndị bishọp "ohere ịkekọrịta, na mmụọ nke ọrụ nwanne, ahụmịhe ụkọchukwu gị, ọrụ gị, ihe edoghị gị anya, yana uche gị na nkwenye gị. na-arụ ọrụ nke Nzukọ-nsọ, nke bụ ọrụ nke Onye-nwe-anyị “.
“N’oge ndị a ihe isi ike, akụkụ dị iche iche sitere n’Oziọma Mak na-abata m n’uche (Mak 6,30: 31-XNUMX), nke na-akọ ka ndịozi, si laghachị ozi ahụ Jizọs zigara ha, gbakọtara gburugburu ya. Ha kọọrọ ya ihe niile ha mere, ihe niile ha kuziri ma Jizọs kpọọ ha ka ha gaa, naanị ya, gawa ebe ndị mmadụ na-anaghị anọkarị ka ha zuru ike. "
O kwuru, sị: “Ọ dị mkpa na anyị ga-alaghachikwute Jizọs mgbe niile, onye anyị na ya na-ezukọ n'òtù oriri nsọ iji gwa ya ma gwa anyị 'ihe niile anyị mere na ihe anyị kuziri' na nkwenye siri ike na ọ bụghị ọrụ anyị, kama ọ bụ nke Chineke. azọpụta anyị; anyị bụ naanị ngwaọrụ dị na aka ya “.
Pope kpọrọ ndị ụkọchukwu ka ha gaa n'ihu na-arụ ọrụ ha n'oge ọrịa a "ọ joyụ na mkpebi siri ike".
Ọ sịrị, "Nke a bụ ihe Onyenwe anyị chọrọ: ndị ọkacha mara n'ịhụ ndị ọzọ n'anya ma nwekwa ike igosi ha, na ịdị mfe nke ngosipụta ịhụnanya na nlebara anya kwa ụbọchị, mmetụ nke ịdị nro nke Chukwu,"
"Bemụnna m, e kewaala", ọ dụrụ ndị ụkọchukwu na ndị bishọp ọdụ, na-adọ ha aka na ntị megide ọnwụnwa inwe "mmụọ nke mmụọ ịrọ òtù, na-abụghị ịdị n'otu Churchka" na mwepu nke ọrịa a na-ebute.
Pope Francis gwara ndị ụkọchukwu Venezuela ka ha maliteghachi "ọchịchọ ha i toomi Ezigbo Onye Ọzụzụ Atụrụ, ma mụta ịbụ ndị na-ejere mmadụ niile ozi, ọkachasị nke ụmụ obere na ụmụnne nwanyị ndị dara ogbenye na ndị tufuru oge niile, na iji hụ na, na nke a oge nsogbu, onye ọ bụla na-enwe mmetụta isoro, akwado, hụrụ n'anya “.
Cardinal Jorge Urosa Savino, Achịbishọp Emeritus nke Caracas, kwuru na mbido onwa a na oria ojoo a emeela ka ndi Venezuela bukwuo nsogbu aku na uba, mmekorita mmadu na ndoro ndoro ochichi.
Onu ogugu na Venezuela gafere nde 10 na 2020 na ụgwọ ọnwa kwa ọnwa nke ọtụtụ ndị Venezuelan enweghị ike ikpuchi ụgwọ nke galọn mmiri ara ehi. Ihe karịrị nde mmadụ atọ ndị Venezuela ahapụla obodo ahụ n’ime afọ atọ gara aga, ọtụtụ n’ime ha ji ụkwụ.
"Ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke akụ na ụba na nke mmekọrịta ọha mmadụ na-aga n'ihu na-adị njọ, na oke onu oriri na oke mbibi, na-eme ka anyị niile daa ogbenye na ndị ogbenye," Urosa dere na Jenụwarị 4.
"Ọdịnihu dị njọ n'ihi na gọọmentị a enweghị ike idozi nsogbu nke ọchịchị nkịtị, ma ọ bụ inye nkwa ikike ndị mmadụ bụ isi, ọkachasị ndụ, nri, ahụike na njem".
Ma Kadịnal nke Venezuelan kwusiri ike na "ọbụlagodi n'etiti ọrịa na-efe efe, nsogbu akụ na ụba, mmekọrịta ọha na eze na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, n'etiti ọnọdụ onwe onye na-adịghị mma nke ụfọdụ n'ime anyị nwere ike ịta ahụhụ, Chineke nọnyeere anyị".
Pope Francis kelere ndị ụkọchukwu na ndị bishọp nke Venezuela maka ọrụ ha n'oge ọdachi a.
“Site n’ekele, a na m ekwenye na m nọ m nso ma na-ekpe ekpere nye unu nile ndị n’emezu ozi nke Nzukọ-nsọ ​​na Venezuela, n’ime mkpọsa nke Ozi-ọma na n’ọtụtụ atụmatụ ebere maka ụmụnne nke ịda ogbenye na nsogbu ahụ ike gwụrụ. Ana m enyefe unu niile n’arịrịọ nke Our Lady nke Coromoto na nke Saint Joseph ”, Pope kwuru